Ururka Caafimaadka Adduunka oo ka digay faafitaanka COVID-19 - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Ururka Caafimaadka Adduunka oo ka digay faafitaanka COVID-19
Ururka Caafimaadka Adduunka oo ka digay faafitaanka COVID-19
Khubaro Caafimaad oo ku takhasusay cudurrada faafa ayaa sheegay in wali dadka dunida ku nool ay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco Xanuunka Covid 19, gaar ahaan Delta.
Sidokale khubarada ayaa ka dhawaajiyay in ciribtirka fayraska kala duwan ee Corona, uu u baahanyahay dadaallo wadajir ah si loo hirgeliyo qorshaha lagu xakameynaayo.
Muuqaal laga duubay Dr. Maria Van Kerkhove, oo lagu baahiyay Bogga tweet-ka Ururka Caafimaadka Adduunka, oo looga hadlaayay la dagaallanka Covid-19, ayaa lagu qeexay in kororka tirada dadka cudurka qaba ay ku sii badanayaan Waddamada Brazil iyo India.
Dr. Maria Van, ayaa ka dhawaajisay in ay muhiim tahay in Dowladaha Caalamka ay si wada jir ah u hir galiyaan qorshaha la dagaalanka Corona Virus, gaar ahaan faraciisa Delta oo hadda meel ka mid ah Caalamka khatar ku haya.
Previous articleGuddoomiye Mursal oo Arrimaha doorashooyinka kala hadlay Safiirka Sweden
Next articleShirkii laascanood oo furmay & Guddi looga dhawaaqay